Usakanganwa online mune yako kushambadzira kwepasirese! | Martech Zone
Usakanganwa online mune yako kushambadzira kwepasirese!
Chitatu, June 11, 2008 Svondo, Zvita 10, 2017 Douglas Karr
Maitiro epamhepo evatengi ari kuve anokosha kune vashambadziri vepamhepo, asi anga achinyanya kupotswa zvine chekuita nezvinhu zvekunze. Makambani mazhinji ane zvitoro zvekutengesa, pamwe nezvitoro zvepamhepo, vanobata vateereri vaviri zvakasiyana, vachishaya mukana wakanakisa wekutarisa nekuteedzera mumwe.
enderera analytics kunyorera kwakadai seWebTrends, Coremetrics, uye Omniture zvakanyanya kubatwa senge masisitimu ekuzivisa asi akabata data rakakosha revatengi iro rinogona kupatsanurwa uye kushandiswa kune vashanyi mukati me data rako.
Email Vashandi Vanopa inobatawo mavhoriyamu ehunhu hwekuita Yakasanganiswa neAnalytics aya masisitimu anogona kuteedzera maitiro emutengi kubva pakudzvanya-kusvika pakutendeuka. Kumanikidza vashanyi vako pamhepo kunopa nzira yakapusa yekutora iyi data. Mune zvaunopa, zvinobatsira kuisa kiyi yakasarudzika yemumwe wevatengi vako.
Sezvo zvaungasanganisira kodhi yemushandirapamwe pane yakanangana tsamba chidimbu, kuvaka peji rinomhara kuti utore yakasarudzika kiyi yemutengi inzira inoshanda yekutevera iye anenge anyorera. Iyo peji yekumhara inogona kupa mvumo-yakavakirwa kusarudza-mukati kune kumwe kushambadzira. Iyo kiyi inogona kuzowedzerwa kusvika kumagumo ewebhu kero (URL) kuburikidza ne querystring (http://mycompany.com/'s=12345) uye chengetwa mukuki uko inogona kutariswa zvakasarudzika pane yako saiti.
Mhuri dzine maitiro akawedzera epamhepo dzinogona kuve dzakakamurwa kubva kune yako yakananga tsamba uye materevhizheni zvinyorwa, uye pachinzvimbo, kutumirwa email - uchipa yakanangwa, yakakodzera nguva meseji pamutengo wakaderera kwazvo. Izvo zvakakosha kuti uzive izvo UNOGONA-SPAM mitemo yemubatanidzwa shandisa uye zano rakanakisa nderekutora email kero nekuzvidira uye kushanda neanozivikanwa Email Service Provider iyo inopa kununurwa uye kusazvinyora masevhisi ekuchengetedza iwe kunze kwedambudziko.
Usakanganwa kuti kuedza kwako kushambadzira kunogona zvakare piggy-kudzorera ako emaemail emaemail. Transactional maemail chero maemail anotarisirwa semhinduro kubva kumutengesi. Mienzaniso mishoma iri kubhadhara uye / kana kutenga meseji yekusimbisa. Kana kambani yako iri kuita kubhadharisa pamhepo, urikushaya mukana wekutanga neprimiyamu real estate kuti uite upsell kana imwe yekuwedzera!
Kana iwo meseji achinyanya kutengeserana, CAN-SPAM haifanire kushandisa. Ingova nechokwadi chekusasanganisa zvaunokoshesa sezvo iwe ungazopedzisira uine yakanaka kwazvo. Email Kushambadzira inopawo zvine simba zvemukati zvinoenderana nesiteji chikamu. Izvi zvinokutendera kuti ushandure meseji kana mifananidzo yeemail zvichibva kune wamunyorera.
Meseji kumhuri inopesana neyekoreji mudzidzi anogona kuve neerbiage nemifananidzo zvakasiyana zvachose - asi zvakadaro buda muiyo chaiyo email! Zvisungo muemail yako zvinogona kuteverwa kumashure kune peji rekumhara kana saiti uko zvemukati manejimendi manejimendi ari kupa zvine simba zvemukati zvakare. Iyi data inogona kuve yakakosha zvakanyanya kune Vanoshambadzira futi!
Iko kugona kwekubatanidza vashanyi vako vepamhepo vane huwandu hwevanhu mukana wakakura wekupa vanotarisira kushambadza vane maficha ekuverenga uye ongororo - uye zvichaderera uye zvine chokwadi kupfuura masevhisi epamhepo anonyepedzera kupa zvakafanana.
Ipa pfungwa kune maviri ekuwedzera manyuko e data kune yako dhatamart: Web Analytics uye Email Marketing. Regedza iyo data mune yako kushambadzira kwepasirese pamwe nekuibatanidza mune yako Email Kushambadzira! Iwe unozochengeta tani yemari pane inokura postage uye unokwanisa kuyera ipapo ipapo mhedzisiro online.
Tags: Analyticscan-spamcoremetricsmail yakanangaeemail service providerkunyanyaomniturekushambadzira kwetsikazvideo
Nei typepad yakagadzira iyo WordPress Anti-Spam Plugin?
MBP: Micro-Blogging Provider uye Protocol
Jun 13, 2008 pa6: 47AM
Zvinosetsa handizvo; Kazhinji vatengesi vanoshandisa nzira imwecheteyo kushambadziro kwavo. Mabhajeti akaisirwa nzira pamberi uye akavakirwa pakutora nzira imwecheteyo sepakutanga. Nekudaro, kufunga kwakanaka hakudi here? Saka zano rinofanirwa kushanduka kubva pane izvo zvinofanirwa kana zvinogona kuitwa izvozvi? Tine mukana wekutamba nemusanganiswa wakakura kwazvo we media yemisangano yedu yakasanganiswa uye nhoroondo inotiratidza kuti ndivo vafungi vekusika vanokohwa mibairo yekuzadzisa zvinangwa zvavo.
Kune makambani, uye indasitiri, kudada nehunyanzvi haifanire kunge rakaoma basa kuti uve neunyanzvi.